Kemgbe e mechara ntụli aka maka ịhọpụta onye isi ala na mba ahụ, a na-ebo Trump na ndị otu ya ebubo na ha na ndị Rọshịa gbakọrọ aka mee nrụrụ aka, ma ọ bụ gwuo ojoro, nke mere Trump jiri nwete mmeri megide Hillary Clinton n’afọ gara aga.
Ndị ụlọ ọrụ na-ahụ maka nyocha n’Amerịka, bụ Federal Bureau of Investigation (FBI), malitere tinyewe anya n’ebubo ahụ. Trump tụgharịrị chụọ onye isi ndị FBI, bụ James Comey, n’ọrụ. Nke a mere e jiri họpụta Robert Mueller dịka onye okaịkpe pụrụ ịche maka ịme nnyocha.
Mueller na ndị otu ya na-eme nnyocha kemgbe ọnwa ise gara aga.
Taa bụ Mọndee, abalị 30 nke ọnwa Ọkụtoba, Robert Mueller gbara Menafort na Gates akwụkwọ.
Anyị amatachabeghị ihe niile Mueller si mmadụ abụọ ndị ahụ mere. Kama, anyị na-atụ anya n’akwụkwọ ahụ a gbara ndị a taa ga-agụnye akparama agwa aka azụ, yana izo usoro nzụkọrịta okwe n’etiti Menafort na ndị mba Yukren.